Talaabooyinka Simple si ay u gudbiyaan Video ka iPhone (iPhone 6 ka mid ah) si Computer
Sidee si ay u gudbiyaan Videos From iPhone in Computer For Free
Waa la shaki ku jirin in aad ka heli doontaa user iPhone ah baadi dhan internetka sida ay u gudbiyaan waxyaabaha ay u computer. Si waxyaabaha sida videos wareejiyo si aad u computer noqdo mid sahlan gaar ahaan marka la isticmaalayo Wondershare soco Go Retro.
Part1: Saxiixa Videos From iPhone in Computer la TunesGo Rerro Easy iyo Fast
Part2: Isticmaalka cable si ay u gudbiyaan Videos From iPhone in Computer
Part3: Isticmaalka WordPress si ay u gudbiyaan Videos From iPhone in Computer
Part4: Isticmaalka iCloud si ay u gudbiyaan Videos From iPhone in Computer
Part5: Isticmaalka Lugood si ay u gudbiyaan Videos From iPhone in Computer
Iyadoo app this dhow dahay waxaad awoodi doontaa inaad si ay u gudbiyaan Dufcaddii ah ee files jeer gaaban gudahood. Tani waa si ay sheegayaan in uu tashiilo waqtiga. Si sharraxaadda ee waa in files in aad wareejiso ka qalab si aad u computer noqon doonaa ammaan iyo tayada asalka la hayo. Miyaanan xusin in aad u baahan tahay shabakad daruur lahayn? Ma aha oo kaliya in Wondershare soco Go Retro sidoo kale oggolaan doono in aad maamulato playlist. Tani waa waa in ay leeyihiin software in aad kala soo bixi waa. Hadda, ha i tusaan sida loo wareejiyo aad qaali videos ka iPhone in computer si xor ah. Tani waa app fiican in uu leeyahay version daaqadaha iyo version Mac.
Tallaabada 1 Download Wondershare TunesGo Retro
Booqo http://www.wondershare.com/ iyo soo bixi Wondershare TunesGo Retro oo ku xidh on your computer. Waxaad is adkeynin karaa jeebka ku haysato oo ay ku iibsadaan ama isticmaalaan version maxkamad lacag la'aan ah. Aniga ahaan aan u isticmaalo maxkamadda lacag la'aan ah Mac.
Tallaabada 2 xiriiriyaan iPhone in computer
Waa in aad ku xidhi aad iPhone in computer isticmaalaya cable USB ah. Markaas furo codsiga kombiyuutarka aad u.
Videos Tallaabada 3 Transfer in aad PC
On uu furmo suuqa ugu weyn ee Wondershare TunesGo Retro aad arki doonaa iPhone hogaanka kaga tegey liiska fayl ah waxa ay ka kooban tahay. Scroll guud ahaan fayl ilaa Movies tab. Guji ku yaal iyo liiska videos aad ku kaydsan muuqan doonaa shaashadda. Dooro filimada aad rabto in lagu wareejiyo oo guji dhoofinta ugu sareysa. Xusuusnow si loo ogaado goobta ay u wareejiso waxyaabaha on your computer.
Taasi waa sida aad si degdeg ah si aad u computer wareejin karaan videos la yaabka leh Wondershare TunesGo Retro app. Oo weliba waxaa jira siyaabo kale oo lacag la'aan ah in ay ka iPhone wareejiyo music in computer sida isticmaalka cable ah, iyadoo la isticmaalayo WordPress iyo sidoo kale Lugood. Haatan aynu ka eegno mid kasta oo ka mid ah hababka kor ku xusan
Waxaad sidoo kale ku wareejin kartaa videos ka iPhone in computer aan codsiga. Waxa aad u baahan yahay your computer, cable USB ah iyo iPhone. Markaas raac tallaabo degdeg ah
Tallaabada 1 Connect aad iPhone Si Computer
Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan qalabka labada doorbidayo mid aad soo iibsatay oo aad iPhone.
Tallaabada 2 Orod aad iPhone on your computer
On your computer aad iPhone ka muuqan doontaa hoose ka tagay sida lagu kaydiyo dibadda.
Tallaabada 3 Dooro videos ah si ay u gudbiyaan
On your computer guji aad iPhone in uu soo bandhigo waxyaabaha uu ka kooban yahay. Tag videos ama filimada dooro filimada si loo wareejiyo . Tag Import oo guji Edit. Si aad nuqul guji Copy oo dhan videos soo xulay.
Tallaabada 4 Transfer oo dhan videos ka
Haddaba tag si aad u computer ka dib markii la qeexo goobta iyo guji koollada. Waxaad kale oo jiidi karaan waxyaabaha ka iPhone si aad u computer. Habkani waa xoogaa gaabis ah tan ay tahay in aad sugto files in la soo guuriyeen on your computer.
WordPress waa haring faylka kuu ogolaanaya inaad u soo dirto iyo files dukaanka. Iyadoo codsigan aad weli wadaagi karaan videos.
Tallaabada 1 Download iyo rakibi WordPress on qalabka aad.
Marka hore waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo WordPress on your computer iyo aad iPhone. Markaasuu soo dajiyo oo la furo.
Tallaabada 2 dooran videos ah si ay u gudbiyaan aad iPhone
Hadda beddelaan si aad iPhone iyo furi Click app ku Uploads. Waxaad arki doontaa wax a + icon, guji ku yaal. Tani waxay ugu danbeyn muujin doonaa waxyaabaha aad iPhone. Dooro videos ah si ay u gudbiyaan. Qeex meel si ay u gudbiyaan waxyaabaha guji Upload hoose ee aad app.
Tallaabada 3 Download Videos On Your Computer
On aad suuqa kala WordPress on your computer aad arki doonaan videos doortay iPhone oo u baahan in laga soo degsan. Riix folder, oo waxay u dejisan. Tani waa sida aad u heli doonaa files wareejiyo your computer la DropBox ah.
Qeybta 4: Isticmaalka iCloud si ay u gudbiyaan Videos From iPhone in Computer
Lahaanshaha aad iPhone iyo computer aad weli ku wareejin karaa videos si xor ah.
Guddi qaybsiga sawir iCloud aad iPhone. Tag iPhone tab iyo guji Settings ka dibna dooro iCloud
Hadda riix suuqa kala kaydinta kaabta iyo inay awood u kaabta iCloud inay geliyaan video ku saabsan iPhone iCloud guji Back Up Hadda
Hadda noqon si aad u computer. Mac guji Apple Menu, ka dibna aad rabtid System iyo dooro iCloud
Ku qor isticmaalka isla Apple Id oo taga si Photos . Markaas guji Photo Stream iyo dhoofin videos ah in aad damisid.
Waa in ay la iCloud aad lagugu xiro Internet si loo fuliyo layligan si guul leh
Qeybta 5: Isticmaalka Lugood si ay u gudbiyaan Videos From iPhone in Computer
Lugood sidoo kale wax yaabahan on qalabka tufaax kuu oggolaanaysa in aad wareejiso files si xor ah. Waxaad ku wareejin kartaa videos, sawiro iyo maktabadda music iyo kuwa kale
Tallaabada 1 Connect aad iPhone in your computer iyadoo la isticmaalayo cable USB ah .
Markaa waa inaad aadaa Lugood on your computer.
Tallaabada 2 Dooro qalab ee Lugood.
Aad iPhone on Lugood iyo dooro alaabta in aad rabto in lagu wareejiyo si kombiyuutarka. Markaas abuuro gal ah iyo jiidi oo dhan alaabta loo doortay in ay aad Desktop. Waqti ay nuqul Waxay qaadan doontaa.
Inkasta oo ah hababka kor ku xusan waxaa loo isticmaali karaa si ay u gudbiyaan videos on macruufka in computer, waxaa jira fursado kale oo ka fiican sida Wondershare TunesGo. App Tani waxay kuu ogolaanaysaa inaad si dhakhso ah oo ka badan soddon qaabab files ka aaladaha warbaahinta wax wareejiyo. Si aad ku dari on, ma aha oo kaliya ayey u taageeraan daaqadaha laakiin sidoo kale Mac. App wuxuu abaabulaya maktabadda iyo iska ilaalisaa in hal hawl ah ee files jira Lugood.
Wixii user Windows kale oo aad isticmaali kartaa nuqul ka Tababaraha trans. Waxay u sahlaysaa aad maamuli files on your qalab macruufka. SyniOS sidoo kale waa ka duwan oo kale oo Lugood oo awood daaqadaha waafajinta qalabka ay macruufka.
Waxaa jira app kala iibsiga ah oo lagu magacaabo Wireless Transfer App in aad kala soo bixi kartaa oo wadaagto videos .Waa waa mid fudud
Download Transfer Wireless App iyo waxa maamula labada aad iPhone iyo computer. Connect labada qalab badan shabakad isku
Mac aad, u tag barnaamijka iyo xirmaan aad iPhone
Marka aad gujisid aad iPhone waxaad arki doontaa warbaahinta aad. Riix videos iyo iyaga doortaan. Ugu dambeyntii iyaga soo bixi in aad Mac.
2 Methods si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Sony Xperia si iPhone
> Resource > iPhone > Sidee si ay u gudbiyaan Videos From iPhone in Computer For Free